महानिर्देशक डा. प्याकुरेलको अवकाशसँगै प्रमुख विशेषज्ञविहीन बन्यो मन्त्रालय, न म्यादथप न नयाँ नियुक्ति हुँदा कामकाजमा गतिरोध – Health Post Nepal
महानिर्देशक डा. प्याकुरेलको अवकाशसँगै प्रमुख विशेषज्ञविहीन बन्यो मन्त्रालय, न म्यादथप न नयाँ नियुक्ति हुँदा कामकाजमा गतिरोध
२०७६ भदौ २३ गते १६:०३
स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल सेवानिवृत्त भएका छन् । डा. प्याकुरेलले ६० वर्षे उमेरहद पूरा भएका कारण शनिबार अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् । स्वास्थ्यसेवा ऐन २०५३ को दफा ४५ को उपदफा १ ले ६० वर्ष उमेर पूरा भएको कर्मचारी सेवाबाट स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रमुख विशेषज्ञ (१२औँ तह) का रूपमा लामो समय काम गरेका डा. प्याकुरेल कर्मचारी समायोजनपछिको पदस्थापनका क्रममा असारको दोस्रो साता विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । डा. प्याकुरेलको अवकाशसँगै मन्त्रालय प्रमुख विशेषज्ञविहीन बनेको छ । १२औँ तह रिक्त रहँदा प्रमुख विशेषज्ञ संयोजक रहने कामहरू अघि बढ्न नसक्ने भएका छन् । विभागको महानिर्देशकका लागि पनि १२औँ तहकै कर्मचारी आवश्यक हुने कानुनी प्रावधान छ । यद्यपि, महानिर्देशकमा त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई समेत निमित्त जिम्मेवारी दिने अभ्यास यसअघि पनि गरिँदै आएको छ ।
मन्त्रालयको १ वर्ष थप गर्ने सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेन
डा. प्याकुरेलले अवकाश पाएसँगै मन्त्रालयमा विशेषज्ञ सेवा अभाव हुने भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डा. प्याकुरेलको म्याद १ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले २ साताअघि १ वार्ष म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थप नगरेपछि डा. प्याकुरेल स्वतः आवकाश भएका हुन् । ऐनको दफा ४५ को उपदफा २ ले सरकारलाई विशेषज्ञ सेवा अत्यावश्यक भएमा ६० वर्ष पूरा भई अवकाश हुने कर्मचारीलाई बढीमा ३ वर्षको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको सोही प्रावधानका आधारमा मन्त्रालयले १ वर्ष म्याद थपका लागि सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले डा. प्याकुरेलको अवधि थप्ने अड्कल लगाइएको थियो ।
प्रमुख विशेषज्ञ अभावमा यी काममा गतिरोध
मन्त्रालयमा १२औँ तहको प्रमुख विशेषज्ञ दरबन्दी रिक्त रहँदा क्षतिपूर्तिलगायत काममा गतिरोध सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्यसंस्थामाथि हुने तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपातबापतको क्षतिपूर्ति समितिको संयोजक १२औँ तहको कर्मचारी हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, उक्त दरबन्दी नै रिक्त भएपछि यस्ता घटना भैपरी आएमा अन्योल सिर्जना हुने अवस्था छ । त्यस्तै, दुईवटा विशिष्टीकृत अस्पतालको अध्यक्ष १२औँ तहको प्रमुख विशेषज्ञ पदेन रहने कानुनी प्रावधान छ । तनहुँको गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र र भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको अध्यक्ष प्रमुख विशेषज्ञ हुन्छन् । तर, डा. प्याकुरेलको अवधि नथपिँदा र नयाँ विशेषज्ञ नियुक्तिको प्रक्रियासमेत अघि नबढाइँदा ती अस्पतालका व्यवस्थापकीय काम ठप्प हुने भएका छन् ।
डेंगुले देशभर महामारीको रूप लिइरहेका वेला मन्त्रालय प्रमुख विशेषज्ञविहीन हुनु झन् प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । रोगनियन्त्रणसम्बन्धी कतिपय महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मा प्रमुख विशेषज्ञलाई छ । यस्तोमा लामो समय मन्त्रालयको अनुभव हासिल गरेका र लामै समयसम्म निमित्तसचिवको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका डा. प्याकुरेलको खाँचो अत्यावश्यक महसुस भएर नै मन्त्रालयले उनको म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले न डा. प्याकुरेलको म्याद थप गरेको छ, न त १२औँ तहमा नियुक्तिका लागि लोकसेवाको प्रक्रिया नै अहिलेसम्म अघि बढाएको छ ।
के भन्छन् डा. प्याकुरेल ?
शनिबारदेखि सेवानिवृत्त भएका डा. प्याकुरेल सरकारले पहिले नै १२औँ तहमा नियुक्तिका लागि प्रक्रिया बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘४० वर्ष सेवा गरिसकेको मलाई पुनः सेवामा झुन्डिरहने रहर होइन, तर मन्त्रालयको अवश्यकताले नै मेरो म्यादको सिफारिस भएको हो,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘सरकारले समय छँदै १२औँ तहमा नियुक्तिको प्रक्रिया बढाएको भए मेरो म्याद थपको फाइल क्याबिनेटमा पठाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता रहँदैनथ्यो ।’
सरकारले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया नबढाउँदा र भएकोलाई म्याद थप पनि नगर्दा भने मन्त्रालयका नियमित तथा भइपरिआउने काममा असर पर्ने डा. प्याकुरेल बताउँछन् । २ महिना र एक साताको छोटो अवधि विभागको नेतृत्व गर्दा आफूले गरेका कामबारेको प्रश्नमा डा. प्याकुरेलले डेंगु नियन्त्रण अभियानदेखि पारदर्शिता कायम गरेको सम्म सम्झिए । समायोजनको पदस्थापनपछि अत्यावश्यक परिस्थितिमा बाहेक कर्मचारीको काज रोकेको, अनावश्यक रूपमा फाइल कहिल्यै नअड्काएको, विभागमा कर्मचारीको पोस्टिङ गर्दा सेवा–समूह मिलाएर मात्र गरेकोलगायतलाई डा. प्याकुरेलले २ महिनाको उपलब्धिका रूपमा बताए । स्वास्थ्यमा समायोजनको अन्योलबारे भने डा. प्याकुरेलको भनाइ छ, ‘गलत फर्मुलाले कहिल्यै हिसाब मिल्दैन ।’ पहिले जनसंख्याको आवश्यकताअनुसार संरचनाको निर्माण गरेर मात्र समायोजन गरिनुपर्नेमा प्रक्रिया नै नमिलाइएकाले समायोजन टुंग्याउन सहज नरहेको डा. प्याकुरेलको आसय थियो ।
अवकाश र म्याद थपबारे के भन्छ स्वास्थ्यसेवा ऐन ?
४५. अनिवार्य अवकाश : (१) साठी वर्ष उमेर पूरा भएको वा दफा १९ बमोजिमको पदावधि पूरा भएको कर्मचारीले सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउनेछ ।
(४) यस दफाको प्रयोजनको लागि कर्मचारीको उमेर देहाय बमोजिम गणना गरिनेछ :